Musharraxiin tanaasulay, ka hor doorashada Puntland ee Aqalka Sare ee Soomaaliya - Caasimada Online
Home Warar Musharraxiin tanaasulay, ka hor doorashada Puntland ee Aqalka Sare ee Soomaaliya
Musharraxiin tanaasulay, ka hor doorashada Puntland ee Aqalka Sare ee Soomaaliya
Garoowe (Caasimada Online) – Xarunta baarlamaanka Puntland waxaa haatan ka socota hadal jeedinta musharraxiinta u taagan ka mid ah noqoshada Golaha Aqalka Sare ee Soomaaliya, kuwaas oo uu horey u shaaciyey madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni.
Sentorada khudbadahooda jeediyey waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Puntland, Mudane Cabdiraxmaan Faroole oo markale doonaya inuu difaacdo kursigiisa Aqalka Sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya.
Faroole ayaa khudbadiisa uga hadlay arrimo dhowr ah oo quseeya xaaladda dalka iyo tan Puntland, wuxuuna kadib ka codsaday golaha wakiilada inay codkooda siiyaan.
Aamino Jaamac Ibraahim ayaa sidoo kale hadal kooban oo ku aadan musharraxnimadeeda ka jeedisay golaha, taas oo muddo fog ka soo shaqeynesay arrimaha bulshada, waxayna si xushmad leh xildhibaanada Soomaaliyeed ee Puntland uga codsatay inay siiyaan codkooda.
Sidoo kale goobta waxaa ka hadlay musharraxiinta kala ah Kowsar Cabdullaahi Xirsi iyo Maxamed Geed Maxamuud oo shaaciyeyn inay tanaasuleen, iyaga oo u mahadceliyey madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, Siciid Deni & baarlamaanka Puntland.
Kowsar ayaa u tanaasushay madaxweyne ku xigeenkii hore ee Puntland Mudane Maxamed Cali Yuusuf (Gaagaab), halka Maxamed Geed Maxamuud uu u tanaasulay wasiirka dekedaha maamulkaasi, Mudane Maxamed Cabdi Cismaan (Majiino).
Doorashada ayaa la filayaa in saacadaha soo socda ay ka bilaabato Garoowe, si loo doorto 11 Senator oo ay Puntland ku leedahay Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya.